इन्टरनेट महंगो हुँदाका ५ फाइदा ! — Harpraharnews.com
५ श्रावण २०७५, शनिबार हरप्रहर न्युज
दिनरात फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम र अनेक सञ्जालमा झुण्डिने बानी परेकालाई खुच्चिङ ! खुरुखुरु कामधन्दा गर्न छाडेर खाली कम्प्युटर र मोबाइलमा इन्टरनेट चलाउनेलाई ठेगान लगाउन ईन्टरनेटमा लगाएको भ्याट र भ्याटको दायरा बढाउने सरकारलाई सलाम ! अब इन्टरनेट महंगो भयो । जो पायो त्यसैले, जुनबेला चाह्यो त्यहीबेला इन्टरनेट चलाउन सक्दैन । खर्चले धान्न नसकिने भयो भनेर कतिले त बन्दै गर्लान् । कतिले पैसा अड्कलेर चलाउनै परेको बेलामा मात्रै इन्टरनेट खोल्लान् ।
डा. केसीलाई काठमाडौं लगिएपछि सुनसान बन्यो अस्पताल, सबै बिरामी र स्वास्थ्यकर्मीहरु त्रसित
सञ्जय दत्तको जीवनमा आधारित फिल्म ‘सञ्जुः द रियल स्टोरी’ बन्दै